Ukuphupha ngeSafran ➡ Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha anesafron. Ukuba uyazibuza ukuba ungawachaza njani amaphupha? funda ukuze ufunde ngakumbi malunga nokutolikwa kwephupha.
I-saffron enongiweyo ifumaneka kwi-stigmas yeentyatyambo zeentlobo ze-saffron ezifanayo. I-Saffron inencasa ekrakra, emuncu kunye nokungena kuyo, nangona kunjalo. Kwelinye icala, ivumba lesafroni eliqhelekileyo linokubakho xa upheka.
Ukongeza, izinto eziqulathwe kwisafron ziqinisekisa ukuba isitya esihonjiswe ngaso sifumana umbala omthubi wegolide. Ke ngoko, ekutolikeni iphupha, ukuba lo mbala utyheli uphambili, uphawu lwephuzi "omthubi" kunye nezinto zalo kufuneka lusetyenziswe.
1 Uphawu lwephupha «isafron» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isafron» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isafron» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isafron» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, isafron inokubonisa njengomfanekiso wephupha umntu ophuphayo ekwimeko ye ukungoneliseki ngaphakathi kwaye ufuna indlela yokuphuma kule nto. Kuba elixesha lokukhathazeka lizise monotony ezininzi kwaye umntu oleleyo uyadikwa.
Kwakhona, uphawu lwephupha "isafron" inokuqulatha isilumkiso ngokuchasene okulindelweyo kunye nethemba. Umphuphi kufuneka azi ukuba uneentshaba okanye abachasi ebomini abaceba iyelenqe ngokuchasene nezicwangciso zakhe.
Ukusela iti yesafron ephupheni unako, ngokutsho kohlalutyo ngokubanzi lwamaphupha Iingxabano zosapho.
Ukuba usebenzisa isafron njengesinongo kwiphupha lakho, ufuna uvuyo ngakumbi kwaye ezahlukeneyo ebomini bakho. Ukutya isidlo esenziwe ngesafroni njengephupha kunokubonisa ukulangazelela komphuphi amava amatsha, afanele ukubonakaliswa kukuzonwabisa okanye ukuthanda izinto.
Ukuba wenza isafron kwiintyatyambo zesafron ngokwakho ephupheni, uhlala uzabalazela ubutyebi kunye nentuthuzelo ebomini.
Uphawu lwephupha «isafron» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, isafron njengomfanekiso wephupha luphawu lwe bulumko kwaye zimele izimvo ezibalulekileyo. Oleleyo uzabalazela ukufezekisa ebomini into anqwenela ukuyiphumeza. Ngamanye amaxesha, uphawu lwephupha "isafron" lunokuqondwa njengesimemo sokuqhekeza yonke imihla kwaye unike "incasa" engakumbi ebomini bakho.
Ukuba umphuphi usebenzisa isafron eninzi xa epheka irayisi ngelixa elele, oko kubonisa isimo sengqondo esibi. Ke ngoko, kuya kufuneka ujongane nemeko yakho yobomi yangoku ukufumanisa unobangela wokucaphuka. Kungoko kuphela apho unokuthatha amanyathelo okulwa nekhonkrithi.
Ukuba umntu oleleyo uyayingcamla ukutya kwakhe kwesafron ephupheni, uya kujonga kwimisebenzi ezayo okanye abanye abantu. Nangona kunjalo, ukuba uyala ukutya ukutya okunje, kubonisa ukuba awufuni kudibana nabanye abantu.
Uphawu lwephupha «isafron» - ukutolika kokomoya
Kubonwa njengesinongo ephupheni, uphawu lwephupha "isafron" lunokuthi, ngokuxhomekeke kutoliko lephupha lokomoya, libuze umntu oleleyo ukuba abeneentlobo ezahlukeneyo kwaye uvuyo kubomi bakho basemoyeni.